China 13 mu 1 Dual USB3.1/Type-C kusvika HDMI RJ45 Type-C PD SD/TF Audio Docking station yeMacbook vagadziri nevatengesi |Wellink
13 mu1 Dual USB3.1/Type-C kuenda kuHDMI RJ45 Type-C PD SD/TF Audio Docking station yeMacbook
1*Rudzi-C/F (Data 5Gbps)
1* SD/TF (2.0), 1*Odhiyo(3.5mm,W/Mic)
Dual USB3.1/Type-C Murume tambo
1.HDMI kubuda kwevhidhiyo: 4Kx2K 60Hz (3840x2160), pasi inoenderana ne1080P, 1080I, 720P (Support HDMI * 2 + VGA kubuda panguva imwe chete)
2.USB-C Mukadzi -PD3.0 & USB2.0 data PD3.0: Tsigira 100W simba mukati;Power out (kuchaja) inogumira ku87W yekuchengetedza.
3.SD / TF Kadhi Reader Reader:50-104MB/s;Nyora:30-80MB/s,kukanganiswa nemhando yekadhi
4.3 USB 3.0 5Gb/s kutamisa data, kudzika kunoenderana ne USB2.0
Ndapota cherechedza:(Chete Tsigira intel chip MacBook Pro/Air, Kwete yeM1 Chip MacBook Pro/Air)
Nekuda kwekuti M1 chip's kudzikisira, haitenderi mbiri mbiri yekutarisa.Saka zvese zvigadzirwa zve usb c adapta hazvitsigire mbiri mbiri yeM1 chip macbook pro/air.
Iyi adapta irumbidzo huru kune yako USB-C New Laptop.Neiyi adapta, unogona kuyerera/kuwedzera vhidhiyo kune yako monitor/purojekita/TV ine 2HDMI port kubva paLaptop/ yako.Uye iwe unogona kushandisa 3 kudya kwemanheru nekukurumidza usb 3.0 ports (Speed ​​up to 5Gbp/s) kubatanidza ma hard drives ako matsva usb c latops.Maviri anotendeseka SD & TF kadhi muverengi kuendesa vhidhiyo / mufananidzo (kusvika 104Mb / s), ipa yakazara kumhanya 100W simba rekubvumidza iwe kubhadharisa laptop yako.
Yakagadzirirwa MacBook Pro/MacBook Mhepo, Tsigiro Yekuwedzera Modhi uye Mirror Mode.
1.HDMI resolution ichange iri 4K/60Hz kana mbiri dzacho dzichitamba panguva imwe chete.(15" ​​ne16 chete" MacBook Pro inogona kusvika 4K@60Hz, 13" MacBook Air inogona kusvika paMax resoluion 4K@30Hz)
Chete Tsigira MacBook Pro/Mhepo ine 2 thunderbolt 3 kune rimwe divi (Isingatsigire M1 Chip)
13"/15" MacBook Pro 2017 2018 2019 2020 2021 kana Newer Version(Isingatsigiri M1 Chip)
13" MacBook Air 2018 2019 kana Newer Version (Isingatsigiri M1 Chip)
Kusvikira ku1000 Mbps Ethernet
Pakarepo kupinda paInternet ne10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet port.
Yakanyanya kugadzikana uye inokurumidza kupfuura isina waya network, inoita kuti iwe uve wakatsetseka uye nekukurumidza wired Internet yekubatanidza, chero kupi uye nekungopenya.
Crystal-yakajeka 4K Dual Monitor 2 HDMI
Iyo USB-C laptop docking station inopa 4K Output vhidhiyo data ine resolution inosvika 3840*2160@30HZ inoenderana nekuratidzwa kweakasiyana resolution.
Wedzera mikana yako yebasa uye kukupa iwe wakagadzikana kuita.Hapana chinodiwa chero madhiraivha kana software, ingo plug uye tamba.Tsigira zvese SST uye MST modhi.Tsigira katatu kuratidzwa kune yako yekuhwina system laptops.Ndokumbira utarise kuti kana ukaishandisa kubatanidza macbooks, inongotsigira girazi modhi isina katatu kuratidzwa.
Mubvunzo:Iyo tambo yakareba sei?
Mubvunzo:Izvi zvichashanda kuMacbook pro 2014?
Mhinduro:Kwete. Izvi zvinobatanidza kuburikidza ne USB-C, iyo 2014 Mac haina.
Mubvunzo:Ini ndoda kumhanyisa Macbook Pro 16 yangu ”(intel) ine mamonitor maviri ekunze chivharo chakavharwa.Izvi zvinogoneka here?
Mhinduro:Ini ndinogona kuvhara MacBook yangu zvishoma, asi kwete zvachose.Asi kuita kudaro kunoshanda zvakanaka.Ndiri kutumira zviri paMacBook yangu kune hombe monitor.Ndakaedza kushandisa kiyibhodhi yangu yekare yeMac, asi pandakanga ndiine MacBook uye ini Mac panguva imwecheteyo mumwe wavo akaramba kuziva keyboard.Ndinovimba mhinduro yangu yakabatsira.
Mubvunzo:Musiyano unoonekwa here kana uchiratidza 4K pa60hz vs 30hz?
Mhinduro:Pane musiyano unooneka.
Mubvunzo:Ini ndiri kupindura mokin nezve imwe chete yekutarisa kukwanisa kushanda, kwete ese ari maviri, modhi #'s macbook pro (13-inch, m1,2020)?maonero - vs16398.
Mubvunzo:Ndine macbookpro (13- inch, 2017, 4 thunderbolt 3 ports) & ndinoda kuishandisa ne 2 dell monitor.inogona here tsigiro yakawedzerwa kuratidzwa mu2 dell monitors?
Mhinduro:Iyi i USB c docking station.Izvo hazvishande nemabhanan'ana ports.
Mubvunzo:Chigadzirwa ichi chakagadzirwa kana kugadzirwa kupi?
Mubvunzo:inowirirana con mac book pro 13 M1?
Mhinduro:Hongu, iyi docking chiteshi inoenderana neiyo Mac Pro 13. M1.
Zvakapfuura: 5 mu1 USB3.1/Type-C kuenda kuHDMI+USB3.0+2*USB2.0+SD/TF HUB W/LED
Zvinotevera: 6 mu1 USB3.0 mini DP kuenda kuHDMI USB3.0 RJ45 SD/TF Docking chiteshi cheSurface Pro 5